Masatō Ibu – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Kaiji: Final Game (2020) Unicode ကိုငျခြီရဲ့ နောကျဆုံးကားလို့သတျမှတျလို့ရတဲ့ 2020 ထှကျ The Final Game လေးကို Blu-ray 1080p DTS Quality နဲ့တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ. ဒုတိယကားမှာ ပိုကျဆံတှသေနျးခြီနိုငျခဲ့ပမေဲ့ အလိမျခံလိုကျရတဲ့ ကိုငျခြီတဈယောကျ ထုံးစံအတိုငျး အခွခေံလကျလုပျလကျစားဘ၀နဲ့ ဖွတျသနျးရငျး အရငျလိုအသကျနဲ့ရငျးရတဲ့ ကစားပှဲတှမှောပွနျလညျပါဝငျခှငျ့ရတဲ့ အခါမှာတော့. အရငျလိုအနိုငျယူနိုငျပါ့မလား ? ကစားပှဲတှကေတော့ အရငျလောကျစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးရဲ့လားဆိုတာ ကွညျ့ကွညျ့ကပြါအုံး ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Van ဖွဈပါတယျ Zawgyi ကိုင်ချီရဲ့ နောက်ဆုံးကားလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ 2020 ထွက် The Final Game လေးကို Blu-ray 1080p DTS Quality နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဒုတိယကားမှာ ပိုက်ဆံတွေသန်းချီနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိုင်ချီတစ်ယောက် ထုံးစံအတိုင်း အခြေခံလက်လုပ်လက်စားဘ၀နဲ့ ဖြတ်သန်းရင်း အရင်လိုအသက်နဲ့ရင်းရတဲ့ ကစားပွဲတွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ အခါမှာတော့. အရင်လိုအနိုင်ယူနိုင်ပါ့မလား ? ကစားပွဲတွေကတော့ အရင်လောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ကျပါအုံး ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ်
IMDB: 5.0/10 134 votes
Empire of the Sun (1987) ဒုတိယကမ္ဘာကြီးအတွင်း Jamie Graham(Jim) ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ Jim အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူက ကျနော့်အကြိုက်ဆုံး မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Christian Bale ပေါက်စလေးဖြစ်တယ်။ Jim ဟာ တရုတ်ပြည် ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူကုံထံမိသားစုက တစ်ဦးတည်းသားလေးပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့ ဂျပန်တပ်တွေ ရှန်ဟိုင်းမြို့ကို အလုံးအရင်းနဲ့ ကျူးကျော်ကြတော့တယ်။ Jim တို့မိသားစုလည်း စစ်ဒဏ်ရှောင်ဖို့ နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာပြီး ထွက်ပြေးကြရတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ Jim ဟာ သူ့ကလေးအိမ်မက် လေယာဉ်ပျံရုပ်လေးကို ကုန်းကောက်ရင်းနဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲမှာ သူ့မိဘတွေနဲ့ လူကွဲသွားခဲ့ရတယ်။ Jim ဟာ နီးစပ်ရာ တွန်းလှည်းပေါ်တက်ပြီး သူ့မိဘတွေကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ Jim အမေက Jim ကိုမြင်နေရပေမယ့် အတူခေါ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အတွက် Jim ကိုအိမ်ပြန်ပြီး စောင့်နေခိုင်းတယ်။ Jim လည်း တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ...
IMDB: 7.8/10 105,474 votes